Mirga hiriira Nagayaa/peaceful demonstration fi Mootummaa Dr. Abiy? | Kichuu
Posted on October 29, 2018 by fmegersa
Deressa Ebba Geneti tin
Yeroo Oromoo lamen wal a’atu
Mootummaan Dr. Abiy/EPRDF nam tokkees tahu, gartuu yookiin walumaagalatti ummati gaaffiis yoo qabaate gaafachuu/mormiis yoo qabaate nagaadhaan seera biyyaa osoo hincabsine dhiheeffachuun mirga jechuudhaan, kabajamaa MM Dr. Abiy irra deddeebi’anii himanii jiran. Kanaafuu mootummaan Dr. Abiy, Hiriirri nagayaa (peaceful demonstration) qaama kami irraayyuu dhihaatu, tahuu hin qabu jedhee sududaan akka hiriirri hin bahamne hindh’oorgine, dh’oorguufillee hin jiru. Kanaafis hiriirri nagayaa Oromiyaan alatti kan akka biyya naannoo Amaaraa fi Tigraytti guyyaa kalee geggeeffamaa oole ragaa dha; rakkoo tokko malees nagaan geggeeffamee dabre. Kan naannoo Oromiyaas tahe kan biroon akkuma kanatti ilaalamuu qaba.
Kan amma mul’achaa jiru, 1) qaama mootummaa Dr. Abiy tahanii, dhimma hiriira bahuu fi bahuu dhiisuu irratti sududaan kan gaafatama hin qabne, garuu ammoo miiruma irratti hundaahuudhaan, wal- jibba nama dhuunfaa ykn gartuu ykn jaarmiyaa tokko irraa qaban irraa ka’anii hiriirri nagaa yeroo ammaa tahuu hinqabu jedhanii nama kakaasuudhaan daranuu waldhabbiin akka babbal’atuu fi beekaas tahu osoo hinbeeknee mootummaan Dr. Abiy akka hin tasgabboofnee fi biyyis akka nagaa hin arganne worra gochaa jiran. 2) Qaama mootummaa Dr. Abiy osoo hin tahin, jijjiirama dhufe deggerra, kanaafuu mootummaa Dr. Abiy tumsina kan jedhan, karaa biraa ammoo gartuu jaarmiyaa siyaasaa adda addaa keessatti ijaaramanii sosso’aa kan turan, rakkoo adda addaa jaarmiyaa isaanii mudate irraa kan ka’e jaarmiyaa keessa turan irraa bahanii jaarmiyaa biraa ijaarrachuun, sirna mootummaa aangoo qabatee jiru mormaa turan, rakkoo sadarkaa duraatti ilaalamuu qabu gochuu dhiisanii, jaarmiyaadhuma isaanii irraa bahan waliin wal dineeffatanii wal irratti qabsaahuu hojii duraa godhatanii soss’aa kan jiran. Akkasumas wal dhabbii adda addaatiin dhuunfaadhaanis jaarmiyaa isaanii irraa bahanii kan faffacahanii taa’aa jiran, maltummaadhaan Jijjiirraa dhufe deggerra, Dr. Abiy malee biyyi ni diigama jechuudhaan Dr. Abiy fi Dr. Lammaa faarsaa, sana dahoo godhatanii, jaarmiyaa isaanii kan irraa bahan san haloo bahanii midhuuf hojii duraa godhatanii kan sosso’antu jira. Yaadaan adda tahuu fi wal hubannaa dhabuun maaliif umama jechuun hin dandayamu, amma worra wal hubannaa dhabee rakkoo jidduu isaaniitti umame kana xiyyeefannaa guddaa kennaniifii wal dura dhaabbachaa jiran ilaalchisee tokko faarsee tokko cephahuufis miti. Garuu rakkoo jal’ina sirna siyaasaa biyya keenya keessatti jaarraa tokko oliif ummata Oromoo irratti geggeefama ture of irraa dabruuf qabsoon wareegama guddaa itti kafalamaa bakka har’a geenye kana gahe kun milkiin akka xumuramu gochuuf, jaalala jaarmiyaa keessa jirruuf ykn deggerruuf qabnu akkuma jirutti taheeyyuu rakkoo wal-gidduuti umamu irratti wal –dandayuu fi waliif obsuun irra aanu malee filmaati biraan hin jiru jechuufi. Sirna cunqurssaa waggaa dheeraaf ummata keenya irratti geggeeffamaa turetu jijjiiramaa jira, sun qabatamaan mul’achaa jiraachuu eenyullee kan haalu natti hinfakkatu. Kana jechuun yeroo cehumsaa keessa jirra jechuu dha. Yeroo cehumsaa keessatti rakkoon adda addaa nu mudatuun ajaa’iba tahuu hin qabu. Garuu ammoo rakkoolee kana siyaasaa bilchaataa fi obsa guddaan irra aanuutu jijjiramni kun akka milkaahu gochuuf gargaaruu dandaya.
Akkas tahee osoo jiruu, rakkoo keessumaayyuu dhihoo kana Oromiyaa dhihaa keessatti ta’aa jira jedhamee kaka’aa jiru kan akka maleetti afaanfajjii fi yaaddoo ummata keessatti uumaa jiru kana, irra guddaa gochaa gartulee lamaan armaan olitti tuqaman irraa tahuun kan mul’atuu dha. Osoo sireen nama hindhabin tafkiin/geergoon nama dadhabde jedhan. Mootummaan Dr. Abiy jijjiirraa godhama jiru qajeelchuudhaan gahee guddaa fudhatee, qaamoota mormitootaa turan hundumaa dubbisee nagaa uumuudhaan, araaraa umuudhaan jijjiirraan kun akka fiixaan bahuuf carraaqaa jira. Kanaafuu mootummaa kanaa fi worra dubbiin sududdaan ilaalu, haga dandayametti akka wal tahanii jijjiirama deemaa jiru kana xumura itti godhan hunduma isaaniituu tumsuu malee, kan tokko gargaaran fakkaatanii carraa argameen tokkommoo gaadanii ceephahuun rakkoo babal’isuu malee enyuufillee hin gargaaru. Mootummaan Dr. Abiy mootummaa EPRDF. EPRDF ammo jaarmiyolee 4n kan utubamee dha. Jaarmiyoleen 4n akka duriitti deemuun dadhabamnaan akka biraatti wal tahanii walumaan mootummaa geggeessaa jiru. Kana jechuun rakkoon isaan gidduu hin jiru jechuu osoo hin taanee, rakkoo jiru mareedhaan irra aananii wal dandayanii walumaan deemaa jiru. Rakkoon jiraateef wali irratti duulanii wal facaasanii angoo mootummaa of harkaa baasaa hin jiran. Kanaafuu rakkoo jaarmiyoota wal dorgoman waliin ka’uu malus mareedhaan wal dandayanii furachuu waan dandayaniif, worri dubbiiin sududaan isaan hin ilaalle rakkoo xixiqqaa xuxuquudhaan babal’atee rakkoo guddaa furmaata barbaaduuf guddaa nama rakkisuu dandayutti akka hin ceeneef of qusachuun guddoo barbaachisa. Siyaasa biyya keenya keessatti deemaa jiru kana keessatti gartulee hedduu fedhii wal hin fakkaanne qabantu qooda fudhachaa jira waan taheef, gartuun tokko qofti gammadee injifatnoon kan galu osoo hin taanee, wal dandayuudhaan hundumtuu injifatee akka galu gochuuf tattaafatuutu furmaata waaraa fiduu dandaya.
Karaa biraa mirgi dimokraasii osoo hin sharafamnee akka dhugoomu qabsoon ummati keenya geggeessaa jiru boqonnaa maayyii irra gahee yeroo jiru kanatti, bu’ura mirgoota dimokraasii kan tahan kan akka mirga wal gahuu, mirga yaada ofii ibsachuu daangaa itti gochuu yaaluun osoo itti hin yaadin mirga dimokraasii duraa dhaabbachuutti nama geessa waan taheef itti yaadamuu qaba.
Biyya sirni parti-daneessaan/multipartyn geggeeffamu keessatti, partiin ijaaramee sosso’u hundumtuu guddatus xiqqaatus biyyicha keessatti ykn hawaasicha keessatti yaada naannahaa jiru tokko calaqqisa. Kanaafuu gaaffii partiin ykn jaarmiyaan tokko kaasu, kun gaaffii jaarmiyaa siyaasaati malee gaaffii ummataa miti jechuunis yaada faallaa sirna dimokraasii ta’a. jaarmiyaan siyaasaa tokko amma ijaaramee sosso’aa jiraatetti, miseensoti isaafi deggertooti isaa xiqqaatanillee qaama hawaasichaa/biyyichaa waan tahaniif mirgi isaanii kabajamuun dirqma taha. Akka kanaan walgahii ykn hiriira – nagayaa heeraa fi seera biyyichaa osoo hincabsin dhihaatu tokko ukkaamsuu yaaluun hojii farra-dimokraasii tahe geggeessu irra adda miti. Mirgooti dimokraasii kun mirgoota mootummaan ykn deggertootni mootummaa yeroo isaaniif mijatu namaaf kennan, yeroo hinmijoofneef ammo nama waakkatan tahuus hin qabu. Kanaafuu qaama ummataa keessaa waan rakkoo tahee itti dhagahame tokkon seeraan iyyadha ykn gaafadha jedhe dhihate tokko sababumti dursanii akka ukkaamamuuf ol-jedhanii gadi jedhaniif hin jiru. Kan barbaachisu gaaffii ykn iyyannaa seera eeguun dhihate san qaamni dubbiin ilaalu keessummeessee deebii barbaachisaa/dandayamaa kennuu dha.
Dhuma irratti, dhimma WBOn “hikkachuu qabaa fi hinqabu” illalchisees kan rakkoo babal’isaa jiran hedduu dha. Duraan dursa mootummaa fi hoogganni ABO waliigaltee araaraa rakkoo tokko malee wal taane jedhanii ummatatti labsanii turan, akka jedhanitti itti gaafatama ulfaataa isaan irraa eegamu hojii irra hin oolchine. San dhiisanii xapha bashoo fi hantuutaa xaphatu. Dhimma WBO ilaalchisee kan rakkoo guddaa uumaa jiru kana. Kanaafuu mootummaan Dr. Abiy keessumaa itti gaafatama guddatu irraa eegama. Afaaniin faashinni qawwee hafeera, wal ajjeesuun nagaa hin fidu jechaa, hojiin garuu, sababa “olaantummaa seeraa kabachiisuu” jedhuun kabaroodhuma TPLF/EPRDF durii tumuun jijjiirama ummatni abdate hin fidu. Waaraana diina kamtu nagaa biyyaaf sodaachifnaan, raayyaan ittisa biyyaa akka dhiha Oromiyaatti duulu godhamee jeequmsa guddaan umaamaa jira. Rakkoo mul’ate dhuguma nagaan dubbatanii furuun dadhabameeti moo humna waraanaa guddaa waan qabnuuf harka kennachiifnee injifatnnoo labasina jechuutu barbaadame laata?
Akkasumas gartuuun lamaan armaan oliitti ibse dhimma kana irrattis akka rakkoon karaa kana jiru daranuu hammaatu malee qooda ijaaraa tahe kennaa hinjiran. Gartuun kun dhimma kana irrattis worruma dubbiin sududaan ilaaluuf osoo dhiisani bareedaa dha. Mootummaan Dr. Abiy fi Hooggantootni ABO walit dhufanii marihatanii araara buusan. Araara geggeessan geessatti waan irrtti waliif galan qabu. Waliifgaluu isaanii malee waan irratti walliif galan kana gadi fageenyaan gadi baasanii waan ummata beeksisan hin qaban. Kanaafuu waliigaltee san ilaalchisee rakkoon yoo isaan mudate, walit dhufanii furmaata akka itti barbaadan hooggantootni gartuu lameniyyuu ibsanii jiran. Waanuma afaaniin jedhan san hojii irra oolchutu nagaa buusa. Kanaafuu worri dhimma kana iratti itti gaafatama sududaan hin qabne hundumti keenya, waan dhimma isaa gadi fageenyaan hinbeekne keessa seennee, miiruma keenyaan kakaanee WBOn “hiikkachuu qaba” ykn “hiikkachuu hin qbu” jennee afaanfaajjiin ummata keessa facaafnu, waltahumsa gartuu lamaan jidduutti tahee ture booressuu yoo tahe malee, rakkoo isaan jidduutti mul’achuuf malu hikuuf waa takka akka hingargaarre beeknee osoo of qusannee jijjirama deemaa jiru kana milkeessuuf guddoo gargaara.